Tsika dzakasiyana muCanada | Absolut Kufamba
Tsika dzakasiyana muCanada
Daniel | | Kanadha
La tsika dzakasiyana muCanada Icho chimwe cheakatanhamara uye akasarudzika maitiro enharaunda yenyika ino. Kwete zvisina maturo pakupera kwegumi remakumi manomwe nyika ino yakatora mureza we tsika dzakasiyana, ichiva imwe yenyika dzakasimudzira zvakanyanya iyo kutama.
Iyi misiyano mhedzisiro yetsika dzakasiyana dzechitendero uye hunhu hwetsika izvo, senyika yevatorwa kubva pakuzvarwa kwayo, vakaumba canadian chitupa.
1 VeMunharaunda Vanhu veCanada
2 Mweya miviri yeCanada: Briteni neFrance
3 Kuenda kune dzimwe nyika uye tsika dzakasiyana
4 Kurumbidza nekushoropodza
5 Tsika dzakasiyana muCanada mune nhamba
VeMunharaunda Vanhu veCanada
ari zvizvarwa zvemuCanada, inozivikanwa se "nyika dzekutanga" inoumbwa nevanhu vanopfuura mazana matanhatu emadzinza vanotaura mitauro makumi matanhatu. Iyo 600 Bumbiro reMutemo inoronga vanhu ava mumapoka matatu makuru: MaIndia, Inuit uye Métis.
Vanhu vemuCanada vemuno ("Marudzi Ekutanga") nhasi vanoumba chikamu che5% yehuwandu hwenyika.
Inofungidzirwa kuti vagari vemo ava vangangoita chiuru nemazana mashanu ezviuru zvevanhu, ndiko kuti, vangangoita 1.500.000% yehuwandu hwenyika. Vanopfuura hafu yavo vanogara munzvimbo dzakasiyana dzekumaruwa kana matura.
Mweya miviri yeCanada: Briteni neFrance
Nechekare muzana ramakore regumi nemanomwe, matunhu ayo ave chikamu cheCanada akaongororwa nekukoloniwa british uye french, kuti nzvimbo dzavo dzekushandura dzakagovaniswa. Kuvapo kweEurope mune idzi nyika kwakawedzera mukati mezana ramakore rechiXNUMX kuburikidza nemafungu makuru ekufamba.
Mushure mekuwana kuzvitonga muna 1867, hurumende dzekutanga dzeCanada dzakagadzira mutemo unovenga vanhu veko izvo zvakazotsanangurwa senge "Ethnocide." Nekuda kweizvozvo, huwandu hwehuwandu hwemataundi aya hwakadzikiswa zvakanyanya.
MuQuebec (Canada inotaura chiFrench) kune simba rakasimba renyika
Zvichida kusvika hafu yezana ramakore yapfuura ruzhinji rwevagari vemuCanada vaive veimwe yemapoka makuru eEuropean: French (yakatarisana nenzvimbo mudunhu re Quebec) neBritish. Nheyo dzetsika dzenyika dzinovakirwa pamarudzi maviri aya.
Vanenge makumi matanhatu muzana vevaCanada vane chiRungu serurimi rwaamai, nepo chiFrench chiri che60%.
Kuenda kune dzimwe nyika uye tsika dzakasiyana
Kutanga muma60, mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika uye zvirambidzo zvaifarira kutama kubva kuEurope neUnited States zvakashandurwa. Izvi zvakakonzera mafashama evatorwa vanobva kuAfrica, Asia uye nzvimbo yeCaribbean.
Mwero weCanada wekupinda munyika ikozvino ndiyo yepamusoro-soro pasirese. Izvi zvinotsanangurwa nehutano hwakanaka hwehupfumi hwayo (iyo inoshanda sekukumbira kwevanhu vanobva munyika dzine hurombo) uye nemutemo wayo wekubatanidza mhuri. Kune rimwe divi, Canada iriwo imwe yenyika dzekumadokero dzinogara vapoteri vazhinji.
Mukuverengwa kwevanhu muna 2016, madzinza anosvika makumi matatu nematanhatu anoonekwa munyika. Pakati pavo, gumi nevaviri vanopfuura vanhu miriyoni. Iyo tsika dzakasiyana muCanada ingangodaro iri hombe pasirese.
Chinzvimbo cheCanada senyika ine tsika dzakawanda yakaiswa muna 1998 ne Canada Multiculturalism Mutemo. Mutemo uyu unosungira hurumende yeCanada kuona kuti vagari vayo vese vabatwa zvakaenzana nehurumende, iyo inofanirwa kuremekedza nekupemberera kusiyana. Pakati pezvimwe zvinhu, mutemo uyu unocherekedza kodzero dzevanhu vemuno uye unodzivirira kuenzana uye kodzero dzevanhu zvisinei nerudzi, ruvara, dzinza, nyika kana dzinza, chitendero kana chitendero.
Yese June 27, nyika inopemberera iyo Multiculturalism Zuva.
Tsika dzakasiyana muCanada nhasi chiratidzo chekuzivikanwa kwenyika ino. Inofungidzirwa muenzaniso wakanaka kwazvo wenzanga dzakasiyana, dzinoshivirira uye dzakashama. Kugamuchirwa nekubatanidzwa kweavo vakauya munyika kubva kumatunhu ese epasi chiitiko chinokosheswa kunze kwemiganhu yayo.
Nekudaro, kuzvipira kwakatsiga kweanoteedzana hurumende dzeCanada ku multiculturalism kwave kuri chinhu chehasha kudzokorora. Anotyisa kwazvo anouya chaizvo kubva kune mamwe matunhu enharaunda yeCanada pachayo, kunyanya mudunhu reQuebec.
Iyo tsika mosaic yeCanada
Vatsoropodzi vanopokana kuti multulturalism inosimudzira kuumbwa kwegeutos uye inokurudzira nhengo dzemarudzi akasiyana kuti vatarise mukati nekusimbisa misiyano pakati pemapoka pane kusimbisa avo akagovana kodzero kana kuzivikanwa sevagari veCanada.
Tsika dzakasiyana muCanada mune nhamba
Iwo maverengera anogara achiburitswa nehurumende yeCanada chiratidzo chechokwadi chenyika tsika dzakasiyana. Heano mamwe eakanyanya kukosha:
Canada Vagari (Mamiriyoni makumi matatu nemasere muna 38) Nemadzinza:
MaIndia ekuAmerica 4,9%
MaLatin America 1,3%
Mitauro inotaurwa muCanada:
Chirungu 56% (mutauro wepamutemo)
French 22% (mutauro wepamutemo)
Chinese Chinese 3,5%
ChiKristu 67,2% (Inopfuura hafu yevaKanada maKatorike uye chikamu chimwe muzvishanu chiPurotesitendi)
Vanenge makumi maviri nezvina kubva muzana vevaCanada vanozvitsanangura sevasingatendi kana kuzviti havasi vateveri vezvitendero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika dzakasiyana muCanada